Izibalo Zohlelo Lokusebenza Kwamaselula | Martech Zone
NgeSonto, uJanuwari 20, 2019 NgeSonto, uJanuwari 20, 2019 Douglas Karr
Ukuthuthukiswa kwezicelo zeselula nokuziphatha komsebenzisi wohlelo lokusebenza lweselula kuyaqhubeka nokuguquka eminyakeni edlule. Izinhlaka zohlelo lokusebenza lweselula zivula iminyango yezinkampani yokwengeza ukuzibandakanya komsebenzisi kanye nolwazi ngaphezu kwesiphequluli sewebhu ngaphandle kokwephula ibhange. Abasebenzisi beselula balindele isipiliyoni sohlelo lokusebenza oluphakeme futhi, lapho bekwenza, bazibandakanya ngokujulile nemikhiqizo ezobanaka.
Umsebenzisi osemaphakathi wohlelo lokusebenza lweselula oneminyaka engu-18 kuya kwengu-24 usebenzisa amahora ayi-121 ngenyanga esebenzisa izinhlelo zokusebenza zeselula neze-tablet.
Amageyimu aqhubeka nokuhola zonke ezinye izigaba ekulandweni, lapho u-24.8% wazo zonke izinhlelo zokusebenza kuyimidlalo. Izicelo zebhizinisi zingamasekhondi akude, noma kunjalo, nge-9.7% yakho konke ukulandwa. Futhi, ezemfundo yisigaba sesithathu esaziwa kakhulu nge-8.5% yakho konke ukulandwa.
Izibalo ezengeziwe zesitolo sohlelo lokusebenza lweselula:
Amazon ihola zonke izinhlelo zokusebenza zeselula ezineminyaka eyizinkulungwane, ngo-35% isebenzisa uhlelo lokusebenza.
Abasebenzisi be-Smartphone basebenzisa isilinganiso se- 9 izicelo mobile nsuku zonke.
Bangu Izinhlelo zokusebenza zeselula eziyi-7 million itholakala phakathi kwe-Google Play, i-App Store yakwa-Apple, namapulatifomu wesitolo esivela eceleni.
Kukhona cishe i-500,000 abamemezeli bohlelo lokusebenza ku-App Store yakwa-Apple futhi cishe i-1,000,000 ku-Google Play Isitolo.
Ngayinye yalezi zinikeza ithuba amabhizinisi. Imidlalo inganikeza izethameli ezibandakanyeke kakhulu ukukhangisa nokwakha ukuqwashisa ngazo. Izinhlelo zokusebenza zebhizinisi zingakhuphula ukuzibandakanya nenani namakhasimende akho. Izinhlelo zokusebenza zemfundo zingakha ukuthembeka nokwethemba ngamathemba akho.
Lokhu infographic kusuka Izixazululo ze-ERS IT, Izitolo Zohlelo Lokusebenza Ngezinombolo: Ukubuka konke kweMakethe, kunikeza izibalo ezithile ezibalulekile ekukhuleni, ekuzuzeni imali, nasekusebenziseni izinhlelo zokusebenza zeselula nezinkundla zazo - App Store Okwe-Apple, -Google Play Okwe-Android, ne- I-Appstore ye-Amazon.